Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Masar » Duulimaadyadii Ka Yimid Ruushka Ee Ku Socday Masar Xarumihii Badda Cas Ee Dib U Bilaabmay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Masar • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii tooska ahaa ee uu ku tagi jiray goobaha loo dalxiis tago ee Badda Cas ee Hurghada iyo Sharm el-Sheikh, taasoo soo afjartay xayiraad socotay ku dhawaad ​​lix sano kadib qaraxii diyaaraddii Ruushka oo ay ku dhinteen 224 qof oo saarnaa.
Saddex duulimaad oo toos ah oo ka yimid Moscow ayaa soo gaaray labada magaalo ee loo dalxiis tago ee Masar Isniintii.
Hurghada ayaa soo dhoweysay laba duulimaad oo dalxiis oo ka yimid Ruushka.
Sharm el-Sheikh ayaa soo dhoweeyay duulimaadkii ugu horreeyay ee ka yimaada Ruushka muddo 6 sano ah.
Wasaaradda Duulista Hawada ee Masar ayaa ku dhawaaqday in saddex duulimaadyadii tooska ahaa ee Moscow waxay yimaadeen laba magaalo oo loo dalxiis tago oo Masar ah shalay, iyadoo Hurghada ay soo dhaweyneyso laba ka mid ah iyo Sharm el-Sheikh oo marti gelisay mid kale.
Ruushka ayaa ugu dambayntii soo afjaray xayiraadii duulimaadka Masar ee socotay ku dhawaad ​​lix sano, ka dib markii uu qarxay diyaarad rakaab oo Ruushku lahaa oo ay ku dhinteen 224 qof oo saarnaa, waxayna dib u bilawday duulimaadyadii tooska ahaa ee Moscow ilaa Hurghada iyo Badda Cas ee Masar. Sharm el-Sheikh Isniintii.
“Saddexda duulimaad waxay calaamad u yihiin bilowga marxalad cusub oo dib loogu bilaabayo dalxiiska Ruushka labada magaalo ee loo dalxiis tago ee Badda Cas Hurghada iyo Sharm El-Sheikh, ”ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Duulista Hawada ee Masar.
Diyaaradaha Ruushka waxaa lagu soo dhaweeyey salaanta biyaha xafladaha oo caado u ah inay helaan duulimaadyo cusub markay soo degaan, halka shaqaalaha gegida ay martida ku qaabileen ubaxyo, hadiyado, iyo muusikada hiddaha.
Duulimaadyada tooska ah ee loo dalxiis tago ee Badda Cas ayaa kaabaya duulimaadyada maalinlaha ah ee u dhexeeya Qaahira iyo Moscow, iyada oo ujeedadu tahay in la soo jiito tirada ugu badan ee suuragalka ah ee dalxiisayaasha Ruushka ee Masar, Abul-Enein, oo ah maamulaha shirkadda EgyptAir Airlines.
Waxaa jira todoba duulimaad oo toos ah oo Masaaridu ku tagaan magaalooyinka loo dalxiis tago ee Badda Cas, mid walbana wuxuu qaadi karaa 301 rakaab ah si uu u daboolo baahida la filayo ee dalxiisayaasha Ruushka, halka diyaaradaha Ruushku ay abaabulaan shan duulimaad isla muddadaas, ayuu yiri.
Ruushku wuxuu ka mid yahay suuqyada dalxiiska ee ugu muhiimsan Masar, maaddaama tirada dalxiisayaashiisa Masar ay kor u dhaaftay 3.1 milyan sannadkii 2014, ku dhawaad ​​33 boqolkiiba wadarta dalxiisayaasha soo gala sanadkaas, ayay tiri Lamia Kamel, oo ah kaaliye wasiirka dalxiiska iyo qadiimiga ee Horumarinta.
Waxay xaqiijisay in dhammaan shaqaalaha hoteellada, meelaha madadaalada iyo matxafyada laga tallaaley COVID-19.
"Dalxiisayaasha Ruushka ayaa ku farxay inay ku laabtaan Hurghada iyo Sharm el-Sheikh si ay ugu raaxaystaan ​​xeebaha qoraxda leh, cimilada cajiibka ah, iyo waliba hawlaha badda," ayuu yiri Kamel.
Socodka dalxiiska oo badan ayaa gacan ka geysan doona abuurista shaqooyin cusub Masar, gaar ahaan inta lagu jiro masiibada, iyadoo tirada duullimaadyada tooska ah ee ka imanaya Russia ee Hurghada iyo Sharm el-Sheikh ay aakhirka kor u kacaan 20 toddobaad kasta.
Bishii Oktoobar 2015, Ruushku wuxuu joojiyay duulimaadyadii tooska ahaa ee garoomada diyaaradaha Masar ka dib markii diyaarad Ruushku ku burburtay Waqooyiga Sinai. Tan iyo markaas, Masar waxay ka shaqeyneysay sidii kor loogu qaadi lahaa tallaabooyinkeeda amniga iyo amniga dhammaan garoomada dalka oo dhan.
Bishii Abriil 2018, Ruushku wuxuu dib u bilaabay duulimaadyadii u dhexeeyay Moscow iyo Qaahira, laakiin waxay ilaalisay mamnuucidda duulimaadyada Hurghada iyo Sharm el-Sheikh.